बैंकहरुमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंकः ११ सर्त सहित माग्यो शिलबन्दी दरभाउपत्र
कुन वर्गको बैंकलाई कति लागनी ? कसरी कहिलेसम्म पेस गर्ने ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । करिब डेढ अर्ब लागनी गर्ने तयारी सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंकसँग सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरेको छ ।
लागनीका लागि ११ वटा सर्त राखेको राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ५४ करोड १५ लाख रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो । उक्त ३ वर्गका वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने बताएको राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गर्ने छ ।
कुन वर्गकालाई कति ?
बैंकले जानए अनुसार क वर्गका बैंकहरुका लागि १ अर्ब २३ करोड ३३ लाख रुपियाँ उसले लागनी गर्ने छ भने ख वर्गका बैंकका लागि २३ करोड ११ लाख रुपियाँ लागनी गर्ने छ ।
त्यस्तै, ग वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ७ करोड ७१ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले यी ३ वर्गका बैंकहरुसँग उक्त रकम लिन इच्छुक भएमा शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरेको छ ।
कहिलेदेखि, कसरी ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार आउने असोज १ गतेदेखि ०७६ भदौ ३१ सम्ममा यो रकम लागनी गरिने छ । यस अवधिमा ३६६ दिनको मुद्दती निक्षेप रकममा त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्न लागेको जनाएको छ ।
कुनै पनि बैंकले लिन चाहेको रकम र उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसमेत स्पष्ट खुलाई तोकेको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराम भर्नु पर्ने छ ।
त्यसका लागि आउने मंगलबार अपरान्ह ३ बजेभित्र कागजात पेश गरिसक्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
के छन् त सर्तहरु ?
१ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्ने छ ।
२ बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको ।
३ निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनु पर्ने छ ।
४ खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्ने छ ।
५ कर्जारस्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको हुनु पर्ने छ ।
६ निकटतम अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालन मुनाफा (ब्यवस्था पछिको) मा रहेको हुनु पर्ने छ ।
७ रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनु पर्ने छ ।
८ लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई यस बैंकले जरीवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनु पर्ने छ ।
९ शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनु पर्ने छ ।
१० बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको । समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने छ ।
११ सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनु पर्ने छ ।